Vishnu: Iray amin'ireo andriamanitra lehibe indrindra eto India | Fitsangatsanganana tanteraka
Vishnu: Iray amin'ireo andriamanitra manan-danja indrindra any India
Te-handehandeha any India amin'ny fialan-tsasatrao manaraka ve ianao ary liana te hahalala bebe kokoa momba ny kolotsaina sy ny fomba amam-panaony? Ny iray amin'ireo lafin-javatra tsy dia fantatra loatra amin'ny Tandrefana dia ny fivavahana hindoa, tena zava-dehibe indrindra hahafantarana ny fomba fisainana sy fahatsapana ny mponina ao India.
Ny fivavahan'ny Hindoa dia feno tantara sy tantara mahafinaritra nataon'i andriamanitra, andriamanitra demonia, demonia, olombelona, ​​ary zavaboary hafa. Na izany aza, ny andriamanitra lehibe amin'ny Hindoisma dia telo: Brahma, Vishnu ary Shiva. Ny tsirairay dia maneho hery manandanja amin'ny fisian'izao rehetra izao: ny mpamorona azy dia Brahma, ny hery mitohy dia Vishnu ary ny hery manimba dia Shiva. Ny telo dia ny Trimurti na "endrika telo" amin'ny teny Sanskrit, izany hoe ny Andriamanitra telo izay iray.
Inona no andraikitry ny Trimurti? Inona avy ireo anjara asan'ny andriamanitra tsirairay ao anatiny? Amin'ity lahatsoratra ity dia hiditra lalina amin'ny fivavahan'ny Hindoa isika mba hahalalantsika bebe kokoa ireo andriamanitra telo ireo ary indrindra fa Vishnu. Mamaky hatrany aorian'ny fitsambikinana!
1 The Trimurti
2 Iza moa i Vishnu?
2.1 Famaritana etimolojia an'i Vishnu
3 Ahoana no ilazalazana an'i Vishnu?
4 Inona avy ireo toetra teolojian'i Vishnu ary ahoana no fanajana azy?
4.1 Inona avy ireo avatar an'i Vishnu?
Araka ny nolazaiko, telo no andriamanitra manan-danja indrindra amin'ny Hindoisma: Brahma, Vishnu ary Shiva. Izy rehetra dia mamorona ny trimurti ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana hery mahatratra ny fifandanjana an'izao rehetra izao, ka tsy azo atao ny mamorona ny famoronana (Brahma) na ny fanimbana izao rehetra izao (Shiva). Ankoatr'izay, amin'ny fahamarinana, ny fitehirizana azy dia hery mitahiry ny filaminana cosmic. Izany no ahafantaran'ny mpino an'io fivavahana io an'izao rehetra izao ary noho izany ny lanjan'ireo andriamanitra ireo ao aminy.
Avy amin'i Brahma Brahmanism no niorina tany India. Sampana iray amin'ny Hindoisma izay mihevitra azy ho andriamanitra ambony, ny niavian'ny andriamanitra hafa rehetra, izay fisehoany. Tamin'ny fanafihana Aryan dia teraka ny Brahmanism izay nahita an'i Shiva sy Vishnu ho andriamanitra kely.
Iza moa i Vishnu?
Fantatra amin'ny fivavahana hindoa ho andriamanitry ny fahatsarana sy ny fiarovana, izy no andriamanitra lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana Vaisnavism izay sampan'ny Hindoisma manana an'i Vishnu ho andriamanitra avo indrindra. Raha ny filazan'ity ony ity, amin'ny maha-mpamorona an'izao rehetra izao azy, dia nanapa-kevitra ny hamelatra ny tenany amin'ny trimurti na "endrika telo" ity andriamanitra ity.
Vishnu dia voampanga amin'ny iraka hampifandanjana ny tsara sy ny ratsy eto amin'izao tontolo izao ary ny olombelona mangataka fanampiana aminy amin'ny fitadiavana ny lalan'ny famonjena.
Famaritana etimolojia an'i Vishnu
Rehefa manadihady ny anaran'ny andriamanitra amin'ny heviny ettyolojika, ny ampahany amin'ny faka "vis" dia midika hoe manorim-ponenana na manenika izay ho avy haneho ny iray amin'ireo toetran'i Vishnu "ilay mameno ny zavatra rehetra."
Amin'izany no ahatsoahana ny fehin-kevitra fa ny anarany dia manondro ilay andriamanitra namelona ny zavatra sy ny zavamananaina rehetra eto an-tany. Manomboka amin'ity toerana ity, ny Vishnu dia tsy voafetra amin'ny fotoana, toerana na zavatra. Tonga tsy manam-petra ny heriny. Toy izany koa, misy mpikaroka izay manamafy fa ny fandikana etimolojia ny anarana dia "izay mamaky amin'ny zava-drehetra."
Ahoana no ilazalazana an'i Vishnu?
Matetika izy no soloina toy ny andriamanitra manana hoditra manga manana endrika olombelona sy sandry efatra mitazona zavatra isan-karazany izay samy manana ny dikany:
Padma (voninkazo lotus izay ankafizin'ny Vishnuists)
Sudarshaná chakrá (fifangaroana mitovy amin'ilay anaovan'ny mpiady ninja ampiasain'i Vishnu hamongorana demonia)
Shankhá (akorandriaka iray izay ny feony any India dia maneho fandresena taorian'ny nandreseny ny fahavalo)
Vato volamena (hamotipotika ny lohan'ireo ratsy fanahy)
Matetika izy no aseho mipetraka eo ambonin'ny voninkazo lotus miaraka amin'i Laksmi, ilay vadikeliny, eo amin'ny lohaliny iray. Izy dia andriamanibavin'ny harena ary miseho amin'ny bhuti-sakti (famoronana) sy kriya-sakti (asa famoronana). Satria i Vishnu dia tsy afaka ny ho anisan'ny famoronana azy (ahamta) na ny heriny manokana, dia mila vady vadin'olona miaraka aminy foana izy. Noho izany antony izany dia tsy maintsy miaraka amin'i Vishnu amin'ny endriny rehetra ny andriamanibavy Laksmi.
Inona avy ireo toetra teolojian'i Vishnu ary ahoana no fanajana azy?
Ny andriamanitra Vishnu dia samy manana ny toetrany masina: ny fahazoana izay tadiaviny (prakamya), ny fahamboniana (isitva), ny kalitaon'ny famoretana ny faniriana (kama vasayitva), ny fifehezana ny hafa (vasitva), ny fanatrarana na inona na inona (prapti), ny hery mihoatra ny natiora (aishwaria), ny fahalalana (gnana) na angovo (shakti), ankoatry ny maro hafa.
Tsy fantatra mazava hoe oviana na oviana no nanomboka nitsaohana an'i Vishnu. Ao amin'ny fanangonana ny zavatra inoan'ireo Aryan (Veda) dia mifandray akaiky amin'i Indra io andriamanitra io ary sokajiana ho andriamanitra kely. Taty aoriana vao lasa ampahany amin'ny trimurti amin'ny fivavahana hindoa izy ary andriamanitra manan-danja indrindra amin'izany finoana rehetra izany.
Ankehitriny dia mino ny Hindou fa i Vishnu dia tonga nofo tahaka ny avatar maro samihafa teto ambonin'ny tany ary io andriamanitra io dia ivavahana amin'ny endrik'ireo avatar ireo amin'ny fomba mahery vaika.
Inona avy ireo avatar an'i Vishnu?
Ao anatin'ny Hindoisma, ny avatar dia fahatongavan'ny andriamanitra iray, indrindra Vishnu. Izany hoe, mitovy amin'ny demigods amin'ny angano greco-romana. Tao anatin'ny Vaisnavism, ireo avatar ireo dia nivory amina kilasy isan-karazany arakaraka ny toetrany sy ny andraikitra voafaritry ny Soratra Masina.
Vananá: ilay dwano, nivoaka ruse-iugá.
Matsia: ny trondro, niseho tao satia-iugá.
Kurma: ilay sokatra, nivoaka tamin'ny satia-jugá.
Varaja: ilay lambo dia, niseho tao satia-iugá.
Narasinja - Ilay liona antsasaky ny nofo, antsasaky ny nofo nofo. Nivoaka tany satia-iugá izy handresy ny demonia Jirania Kashipú.
Parashurama: (Rama misy famaky), niseho tao treta-iugá.
Rama: ny mpanjaka tao Aiodhia, nivoaka tao treta-iugá.
Krishna: (ny manintona) niseho tao duapara-iugá, niaraka tamin'i Balaram rahalahiny. Ny ankamaroan'ny hetsika Visnuist dia mahita azy ho toy ny mampiavaka an'i Vishnu.
Bouddha: (ny olon-kendry) nivoaka tao Kali-iugá. Ireo kinova izay tsy miresaka an'i Buddha ho fanjakana avatar fahasivy Balaram kosa.
Kalki: ny mpanimba ny maloto. Antenaina hiseho amin'ny faran'ny kali-iugá izy io.
Ao amin'ny Hindoisma ny iuga dia iray amin'ireo vanim-potoana efatra misy fizarana vanim-potoana na majā iuga lehibe. Ny vanim-potoana efatra na iugas dia:
Satia-iuga (vanim-potoanan'ny fahamarinana): 1.728.000 taona.
Duapara-iuga: 864.000 XNUMX taona.
Treta-iuga: 1.296.000 XNUMX XNUMX taona.
Káli-iuga: vanim-potoanan'ny demonia Kali 432.000 taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Vishnu: Iray amin'ireo andriamanitra manan-danja indrindra any India
Tena tiako ny zava-drehetra mifandraika amin'ny kolontsaina hindoa,
Mamaly an'i ingrid
Ny marina dia, manala baraka izany. Raha nianatra siansa izy ireo dia ho tsapany fa maharikoriko ny famakiana ity lahatsoratra ity.
Ruth Maria Ortiz dia hoy izy:
Mino ny fahaterahana indray aho ary mieritreritra fa afaka ny ho zazavavy, faly amin'ny fivavahan'ny Hindoa aho satria tsy namoy ny finoany, ny soatoaviny, ny kolontsainy izy ireo, tiako io kolontsaina io.
Valiny tamin'i Ruth Maria Ortiz
Tamara garcia dia hoy izy:
Tiako koa io kolontsaina io, saingy olona iray ihany no nilaza fa manala baraka ny endrika ratsy an'io zazavavy io. Ary mivavaka aminy ho Andriamanitra izy ireo ...
Raha fintinina, ny tsirairay amin'ny hadalany.
Valiny tamin'i Tamara Garcia
Gladys dia hoy izy:
zaza mahatsiravina inona
allegandro dia hoy izy:
Ny marina dia azoko ilay zazavavy, mino aho fa ny vatana vaovao indray ao amin'ny vatana vaovao satria tena mahaliana fa ny vatany dia tena mahaliana satria mitovy amin'ny an'i Vishnu
Valio i alegandro
Adelaide dia hoy izy:
Manimba, mahatsiravina, maharikoriko, biby mampiaiky tokoa
Mamaly an'i Adelaide
fotsy mavokely dia hoy izy:
Heveriko fa tokony hanadihady tsara isika raha mandeha na te hiresaka zavatra iray. eo dia misy tovovavy iray milaza fa tiany io kolontsaina io. Raha tsy fantatrao izay lazainao dia tsara kokoa ny tsy manome hevitra. Izay mpanompo sampy izay misy ao amin'io firenena io no nopotehan'ny Hindus satria tsy eken'izy ireo ilay ANDRIAMANITRA MAHAY, Andriamanitra velona misy ary Ilay Iray ihany afaka manova ny fiainany maizina sy mampalahelo ho an'ireo izay ianjadian'izy ireo ankehitriny.
Mamaly an'i blnca rosa
Alejandro, raha tsy fantatrao izay mitranga any dia aleo ianao manadihady ny zava-drehetra ao ambadik'ireny zavatra ireny. Toa tsy mampihomehy ahy ny hoe maty ny vahoaka iray noho ny tsy fahampian'ny fahalalana, mainka izany fa ny andriamanitra tsy mitondra afa-tsy fahafatesana, fahantrana ary fahantrana ho an'ny olona. Heveriko fa tsy mampihomehy mihitsy ny miresaka ny fahantrana sy ny alahelo iainan'ireto olona mahantra hindoa ireto.
Ringmaster dia hoy izy:
Ny hazavana dia mandeha 300,000 kilometatra isan-tsegondra, ny kintana akaiky indrindra amin'ny tany dia 4 taona eo ho eo eo, ireo no angona tsy azontsika momba ny halavirana sy ny fotoana, fa mbola mino ny majia isika, amin'ny vatana vaovao ao amin'ny masina amin'ny fanadiovana ny fanahintsika. , saingy mbola tsy hitantsika ny halehiben'izao rehetra izao (ampitomboina 300,000 X 60 X 24 X 365 X 4 ny halaviran'ny km amin'ny kintana akaiky indrindra ny tany) raha ny fasika amoron-dranomasina rehetra eto an-tany, ny fasika tsirairay Tsy ho vahindanitra izay misy kintana an-tapitrisany ary anisan'ny iray amin'ireo vahindanitra ireo isika. Tena fiainana sy famelana aina fotsiny io, tsy misy fiainana hafa, tsy misy ora hafa, mora kokoa ny mino ny zavaboary masina noho ny manazava an'izao rehetra izao tsy manam-petra izay sarotra be amintsika. Fotoana tokony hifoha izao
Mamaly an'i efrain
anicurnal dia hoy izy:
Tokony homeko bika ianao amin'ny fametrahana an'io sary io, adala
Mamaly an'i anicurno
danii dia hoy izy:
salama .. tiako fotsiny .. asehoy anao ity .. zahao ny handrina .. ny marika entiny .. ary ampitahao amin'ny tandindon'ny Egyptianina. eo an-dohan'izy ireo .. misaotra .. mahaliana ..
Mamaly an'i danii
XURB dia hoy izy:
Heveriko fa ny fahotana dia tsy avy tamin'ilay zazalahy nanoratra ny blôgy, nanomboka ny fampahalalana azy dia tsy ratsy, ary ilay mazava dia milaza ny MYTHOLOGY HINDU, MANAO FANORENANA IZAY IZAY IZAY INOANA, NY MARINA NY FIVORIANA TSY NY RATSY NA TSY MISY IZAY IZANY NO IZAY MITATITRA IZAO ... IZAY INOANAO NA TSY IZAO KOLONTSAINA dia fanapahan-kevitry ny olon-drehetra ... ARY TSY MISY FANONTANIANA IZAO ETO. NY RATSY NO SARY SATRIA IZANY Mamoaka ampahany amin'ny tovovavy, dia tokony hisarona ny endrik'izy ireo sy ny zanatany ...
Valiny amin'i XURB
Mantus dia hoy izy:
Manaja ny kolontsain'izy ireo aho fa maninona no manompo sary diso miaraka amin'ny fahantrana mihantona amin'ny fitafiany akanjo ary koa ny fihemoran'ny sain'izy ireo tsy vitan'ny fony fotsiny fa koa ny faharanitan-tsaina, tsy mahagaga raha manana kilemaina noho ny finoan'ireo andriamaniny mampihomehy izy ireo
Mamaly an'i Mantus
Vary any Sina
Ny fomban-dravezana amin'ny fanindronana any India